Godane Tegye Yaa Xigi? | KEYDMEDIA ONLINE
Dr. Saciid Ciise Maxamud — Waxaa hogaamiyaha Soomaaliya u buuxsameysa bisha September 10 keeda Labo Sano, wuxuuna hadda bilaabay labakacleyn ku dhisan dhaqanka kelitalisnimada oo ah aniga keliya hadalkeyga dadku ha ka maqlaan warbaahinta, kooxdeyda keliya ha sidato hubka oo cida ay rabto ha ku bartilmaameysto hana isku difaacaan inta kalana ha noqdaan kuwo aan isdifaaci karin oo kooxdiisuna aysan awoodin iney difaacaan ama aysan dooneyn iney difaacaan.
Wuxuu xooga saaray caburinta warbaahinta oo wax badan shacabka Soomaaliyeed banaanka u soo dhigtay, gaar ahaan qorsho la’aanta dhalisay in dalka lagu hogaamiyo taloxumo ku saleysan haamaanimo, waxeyna hogaanxumadaas dalka baday in dowladda hadda jirta ay noqotay dowlad Soomaaliyeed mida ugu xaaraansan ee soomarta.
Waxay dowladu afduubatay suxufiyiin, waxeyna boobtay qalabkoodi, waxeyna u geysatey jirdil muujinaya dhaqan bahalnimo.
Qaramada Midoobey kooxda u qaabilsan dabagalka hantida qaranka Soomaaliyeed waxey dhowaan soo saareen warbixintooda sanad laha ah, waxeyna soo bandhigeen sida hogaamiyaha dalka uu u marooqsaday awooda gudoomiyaha Bangiga Dhexe, isagoo haddana awoodaas si qaldan ugu adeegsaday isdabamarinta hanti ay lahayd shacabka Soomaaliyeed oo abaaruhu ay ku leynayaan dalka gudihiisa, shacabkaas oo qaarkood ka rajobeelay dalka kuna dhamaaday badaha adduunka.
Waxaa la tuhun sanyahay in hanti lagu qiyaasayo tobaneeyo milyan oo Dollar ay ku maqan tahay madaxtooyada Soomaaliya, kuwaas oo aan wax cadeyna loo hayn meel ay ka baxday. Kooxda dabagalka waxey raadiyeen meesha ay ku dambeysey lacag Soomaalida dibeda u tiiley oo lagu qiyaasay 700 malyan, waxeyna kooxda soo xaday qeyb ka mida lacagtaa ay ku warameen in qiyaasta 33 milyan oo Dollar iney lacagtaas kala soo baxeen, waxa ay sheegayaana wixii ka run ah lama xaqiijin karo.
Hogaamiyaha dalka wuxuu marayaa sannadguuradiisa labaad, dadkuna kuma hayaan waxqabad, wadaniyad, daacad, iyo dowladnimo wanaagsan. Shacabku waxey ka waayeen hogaankiisa talo wanaagsan oo dalka lagu hago, nabadgelyo ay ka helaan ciidanka dowladiisa oo qaab maleeshiyaad u abaabulan, cadaalad ay ka helaan dowlada, iyo maamul dowladeed oo dadka iyo dowladda kala badbaadiya.
Shacabku waxey hadda ka fekerayaan sidii ay uga badbaadi lahayeen dowladxumida xuquuqda wadaninimadooda halista gelisey iyo sidii ay isaga difaaci lahayeen iyaga iyo shisheeyaha ku daaban. Gobolkasta oo Soomaaliya ka mida waxaa maanta sugaya shirkado lala galay qandaraas oo laga iibiyey iney kheyraadka gobolkaas xoog kula soo baxaan, waxeyna sugayaan qorshooyin dhowaan la dhameystiri doono iyo ciidamo koofiyado caalamiya iyo kuwo wadankaba wata.
Xisbiga Dadka wuxuu talo ugu soo jeedinayaa Hogaamiyaha Soomaaliya inuusan dadaalkiisa aan waxtarka lahayn uusan ummadda Soomaaliyeed ku gumeyn, taas oo u muuqata waxaan daal, murugo, iyo tacab beenaad ahayn ineysan soo kordhineyn, wuxuuna xisbigu u soo jeedinayaa in uu xilka iska casilo inta aysan imaan in shacabku abaabulaan kacdoon ay isaga tuurayaan xukunkiisa taas oo ay hadeerba taagan tahay iney kacasan tahay dareeenkooda xoogan oo ay uga danqanayaan culaabta ay dowladiisu ku hayso noloshooda iyo xuquuqdooda wadaninimo.
Wakhtiga lagu jiro addunyadu waa col u joog oo cadow la’aan ma shaqeynayaan mashruucyo fara badan oo lacago badan lagu maalgeliyey, waxaana ay dano badan ay ku mideysan yihiin marka laga gudbo mid inuu abuurmo mid kale. Waxaa taas tusaale kaaga filan markii uu gabaabsi soo noqday mashruuca Al qaacida, haddana waxaa bilowday ISIS ama Daacish.
Cadowga laga adkaanayo iyo kan la abuurayo miyeysan ku jirin cashar lagu tusaale qaato inaan fahano sida dalalka soo koraya dushooda loogu kor shaxayo iney muujineyso in maskax ururtay ay ku mideysan tahay iney hamiga ku hayaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay yihiin milkiyad ay leeyihiin oo ay imaneyso xiliga ay sugayaan sida ay cabireyso ooraahda leh “Rab ama ha rabin waa lagu rabsiin.” Waxaa sida badan hindisahaas la adeegsadaa marka cadow la dilo kan xigana la caleemosaaro bartilmaameysigiisa.
Dr. Saciid Ciise Maxamud - Gudoomiyaha Xisbiga Dadka Soomaaliyeed